Ndege dzakachipa dzekutsvaga injini - YENYU ndege paBEST PRICE
Tsvaga iyo ndege dzakanakisisa pamitengo yakanak Izvo zvinokwanisika nekuda kwekutsvaga kwendege uye mapeji ekuenzanisa aripo paInternet uye kuti vafambi vazhinji vanoshandisa kuchengetedza uye kufamba nemutengo wakaderera.
Ndege dzakachipa dzinotsvaga injini
Uchishandisa zvinotevera zvakachipa nendege dzekutsvaga injini iwe unozogona kutsvaga nekutenga yako ndege tikiti pamutengo wakanakisa uye nezvose zvivimbiso. Ndiyo mhinduro yakapusa uye inokurumidza uye iyo yatinokurudzira kubva kuna Absolut Viajes.
Asi hapana chete sarudzo iyi, kune mamwe akawanda mawebhusaiti pamambure. Ndezvipi zvakanakisa? Zvakanaka, sezvo vafambi vese vaine mapeji avo avanofarira, pano tiri kuzopa iwo atinonyanya kufarira:
Rumbo: iyo inozivikanwa online yekufambisa agency inokupa iyo hwayo hwese huwandu hwendege nemitengo yakanakisa clicking here.
eDreams: Imwe yemasangano makuru ekufamba munyika, kana iwe uchida kutsvaga nendege yakachipa tinya apa.
Skyscanner Iyo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa uye ane mukurumbira enjini dzekutsvagisa injini pasi rose. Enzanisa pakati pezviuru zvesarudzo uye tsvaga iyo ndege yauri kutsvaga nemutengo wakachipa clicking here.
Bata icho: Unogona kutsvaga nekuenzanisa zviuru zveendege nekuda kweichi injini yekutsvaga. Kupinda uye bhuku pamutengo wakanakisa tinya apa
Liligo: KuLiligo tinogona kuwana zvese zvaunoda kuti ubhukire ndege yakachipa nezvivimbiso zvese. Dzvanya apa
Kupedzisira inokupa dzakasiyana siyana nendege. Pinda apa uye enzanisa mitengo yese kuti uwane iyo ndege yauri kutsvaga.
Imwe yenzira dzakachengeteka uye dzinokurumidza kupfuura dzose ndeye ndege. Kutenda kwaari, tinogona kutanga kuronga rwendo rwedu rwunotevera. Kwokuenda kunogona kuve kwakasiyana sekufunga kwedu kunotibvumidza. Ehezve, chekutanga pane zvese, zviri nani kutanga kwatinofanira chaizvo kuzviita: kutarisa cheap flights.
Kana pachezvayo, pazororo isu tinosiya yakakwira bhajeti, hazviwanzo nguva dzose kuve zvinoenderana nendege. Nhasi kune zvakawanda zvakanakira uye zvidzikisira, kwaunogona kuwana zvimwe nendege dzakaderera mutengo, pamwe pasina kufunga.
1 Ndege dzakachipa dzinotsvaga injini
2 Kufamba nendege
3 Zvakanakira kubhuka ndege online
4 Tsvaga nendege dzakachipa kuenda kwaunoda kuenda
5 Mashandiro anoita injini dzendege dzakachipa
6 Nzvimbo huru dzekufamba nendege
6.1 Ndege dzakachipa kuenda kuLondon
6.2 Ndege dzakachipa kuenda kuMadrid
6.3 Ndege dzakaderera mutengo kuenda kuBarcelona
6.4 Ndege dzakachipa kuenda kuParis
6.5 Nzira yekubhururuka nendege kuenda kuRoma
Zvakanakira kubhuka ndege online
Imwe yeakanakisa mazano kana zvasvika kune bhuku ndege online, kuzviita zvakanaka, pasina rubatsiro rwemunhu. Tiri kuzopa nguva yakawanda kwazviri, asi nekuti tinofanirwa kuenzanisa uye kuverenga ruzivo rwese rwatino kupihwa neinternet.
Tsvaga zvakadzama kwazvo: Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kubata yakanaka yekutsvaga injini, senge iyo yatinokupa iwe. Izvo hazvidi chinhu chakaomesesa, asi kuziva kuti isu tichawana chaizvo izvo isu zvatiri kutsvaga. Chimwe chinhu chiri nyore uye chinokurumidza chinoita kuti basa redu rive nyore. A injini yakanaka yekutsvaga ichave nebhokisi yekuzadza kubva kuMavambo kusvika kwairi kuenda. Saizvozvowo, kuenda uye kudzoka kwakakosha kuti ubudirire nerwendo rwedu. Mune imwe nyaya yemasekondi isu tichava nezvedu kwese nendege dzakachipa dzichine zvigaro.
Bids: Hapana mubvunzo, zvinopihwa zvakare marongero ezuva. Nekudaro, hazvikuvadze kutarisa akasiyana mawebhusaiti kuti ukwanise kuenzanisa akanakisa mitengo. Ita shuwa kuti mune ese iwo, ekupedzisira mhosva dzakanyatsotsanangurwa, izvo zvinoratidzwa mune mutengo. Usatakurwe nezvikomborero zvakakura, usina kuverenga zvakanaka zvakadhindwa.
Runyararo rwepfungwa uye nyaradzo: Ehe tichaita zvese izvi tiri kumba. Kupera kwevhiki, patinenge tiine nguva yakawanda, inogona kunge iri nguva yakanaka. Nenzira iyi, isu tinokwanisa kufamba nenzira yakadzikama, uchienzanisa mhando dzese dzendege pamwe nezvipo zvinopihwa kwatiri. Chokwadi mune akati wandei mabhatani iwe unenge uine zvese zvaunoda kuti ive isingakanganwike rwendo.
Tsvaga nendege dzakachipa kuenda kwaunoda kuenda
Sezvatakambotaura, chekutanga kufunga nezvekwaunoda kuenda. Izvozvi zvatave nazvo kuti zvionekwe, chii chatingaite kuwana ndege dzakachipa?
Kuchinjika: Pasina kupokana, kuchinjika kwemapurogiramu ndeimwe yezvombo zvedu zvakanaka kuti tikwanise kuwana zvakanaka ndege inobata. Ramba uchifunga kuti mitengo ichakwira patinosarudza nzvimbo dzakakurumbira uye dzevashanyi. Nenzira imwecheteyo, isu tese tinoziva kuti mwaka wepamusoro uripi uye maitiro aachave nawo pamitengo zvakare. Nedu injini yekutsvaga kwendege, iwe uchave unokwanisa kuwana kwazvinoenda kwausina kana kumbofunga nezvazvo asi nemitengo mikuru chaiyo Nzira yekutakurwa uye kutsvaga yakasarudzika nzvimbo.
Tenga kutiza kutanga kana kunonoka?: Panogara paine kusahadzika kukuru mumubvunzo uyu. Hazvisi nyore kupindura. Zvichaenderana nezvinhu zvinoverengeka, asi isu tinogona kutaura kuti zvese kubhuka pamberi pachine nguva uye kunonoka kunogona kutungamira mukuwedzera kwemutengo wetikiti. Chii chatingaite mune idzi kesi?. Zvakanaka, sekutonga kwakawanda zvinonzi pakutanga, bhuku mwedzi yakati wandei zvisati zvaitika. Kune rimwe divi, pane ichangoburwa, angangoita mavhiki matatu kana mana usati watanga rwendo rwako. Sekureva kwenhamba dzesangano, zvinotaurwa kuti nguva chaiyo yekutenga nendege isingadhuri ingangoita mazuva makumi mashanu apfuura. Mushure menguva ino, mitengo inogona kukwira zvakare, saka gara wakangwarira.
ZviyeroKunyangwe ichigona dzimwe nguva kunetsa, iri zvakare imwe kiyi yekuwana yakaderera mutengo ndege. Pasina mubvunzo, kune dzimwe nzvimbo dzinovada uye, kunyangwe vachititsaudzira kuenda kune imwe nzvimbo, chinhu chakakosha mhedzisiro mune mutengo wekupedzisira. Iyo yakakwana nzira yekurasika munzvimbo iyoyo yatakange tisingazive uye iyo inotipa nguva yekuona tisati tasimuka zvakare.
Mashandiro anoita injini dzendege dzakachipa
Hapana mubvunzo injini yekutsvaga nendege ndechimwe chezvishandiso zviri nyore kushandisa. Zvichida nekuti inongova iine iwo mabhokisi akakosha kuti ave mapfupi mukutsvaga kwedu. Kutanga, iwe unozoratidza iyo Yakatangira. Iwe unogona kusarudza zvakananga nhandare yako yepedyo pamwe nezita reguta rako. Nenzira imwecheteyo, iwe uchafanirwa kuita chaizvo zvakafanana nenzvimbo yauri kuenda. Iyo nzvimbo iyo kwauri kuenda kuti unakirwe neyako inokodzera zororo.
Kana izvi zvangozadzwa, tichafanira kuenda kunoona mazuva ekutiza kwedu. Karenda inozoratidzwa, saka iwe unofanirwa chete kusarudza zuva chairo. Uye zvakare, iwe unogona kusarudza pakati pekuti iri imwe nzira kana kuenda nekudzoka. Zvakareruka, handiti? Zvakanaka, iwe unofanira kungodzvanya bhatani, "Tsvaga" uye ndizvozvo. Panguva ino sarudzo yakasarudzika yesarudzo dzese ichaonekwa. Mawebhusaiti akasiyana anokupa yakanakisa nendege nemutengo mukuru. Saka iwe unogona kuenzanisa uye kusarudza iyo inokodzera iwe zvakanyanya.
Nzvimbo huru dzekufamba nendege
Ndege dzakachipa kuenda kuLondon
Imwe yei nzvimbo huru ndeyeLondon. Gore rega rega kune vashanyi vazhinji vanosvika pakuziva guta guru reEngland. Saka, unogona kuwana nendege dzakachipa kuLondon pese paunoda. Kune makambani mazhinji anovapa uye ndosaka, kubva kuinjini yekutsvaga iwe unogona kuenzanisa ese ndege, pamwe nehurongwa hwavo nemitero. Pakati pevakakurumbira pane Vueling, Ryanair kana Air Europa. Uye zvakare, iwe une kuenda kubva kunhandare huru dzendege uye nemaawa akati wandei mukati mezuva. Iwe hauna chikonzero chinogoneka chekusaenda!
Ndege dzakachipa kuenda kuMadrid
Saizvozvowo, guta guru reSpain rinoshanyirwa kakawanda. Kuenda kuMadrid kazhinji kunodhura izvo zvinosiya chinhu chekutanga mangwanani. Uye zvakare, mazuva evhiki anozove akakosha kuti ukwanise kuona kudzikiswa kwemutengo wekupedzisira. In inopfuura awa imwe unenge wave pauri kuenda.
Ndege dzakaderera mutengo kuenda kuBarcelona
MuBarcelona tichaenda kunosangana neEl Prat airport. Ndiyo yechipiri pakukura muSpain, saka nendege nevatakuri vanoishanyira mazuva ese havaverengeke. Iine nzvimbo nhatu dzekubvisa pamwe nenzvimbo yekumhara. Iyo ine akati wandei emunyika pamwe nemakambani epasi rese, saka zvichave nyore gara uchitsvaga yakaderera mutengo ndege.
Ndege dzakachipa kuenda kuParis
Para kubhururuka kuParisTine makambani akasiyana seIberia, Air Europa, British Airway kana Vueling, pakati pevamwe. Izvo zvinogara zvichitsamira pakuenda uye kusvika kwenzvimbo. Paris ine nhandare nhatu. Charles de Gaulle, Orly naBeauvais. Ivo vese vakanyatsobatana nepakati.
Nzira yekubhururuka nendege kuenda kuRoma
Kana iwe uchida bhururuka kuenda kuRomaUnofanirwa kuziva kuti ine nhandare mbiri dzepasi rese. Izvi zvinodaro nekuti traffic yako yevashanyi iri kuwedzera gore rega rega. Mamwe emakambani anodhura anosvika ari Vueling, Ryanair kana Easyjet. Mavari, unogona kugara uchiwana inopa kune asingasviki makumi matatu euroschero bedzi iwe uchingotakura mukwende wemaoko. Barcelona, ​​Ibiza, Madrid kana Seville ndiwo mamwe mapoinzi akakosha ekuva nendege yakananga kuRome.
Sezvauri kuona, kune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira uye nemitengo yakachipa yakawanda yatinogona kunakidzwa. Iwe unofanirwa kusarudza mazuva uye wotanga kunakidzwa nezororo rako rakakodzera.